Ndezvipi zvinhu zvandinogona kutengesa pamhepo? | ECommerce nhau
E-commerce nzvimbo Vanobvumidza chero munhu ane browser uye account yebhangi kugona kuburitsa zvigadzirwa izvo munhu zvaanoda kubvisa uye kuwana mari mukuchinjana nazvo. Iyo nzvimbo dzekutenga pamhepo ndiyo nzira iri nyore yekutengesa zvinhu nhasi, mazuva ese zviuru nezviuru zvezvinhu zvitsva zvinoburitswa pane aya masaiti akamirira kutengwa, kana iwe usina chokwadi kuti ndezvipi zvigadzirwa zvinogona kutengeswa pamhepo ino chinyorwa chichava chinobatsira kupihwa izvo apa tiri kuenda kuronga zvigadzirwa zvaunogona tengesa online.
Kubva panhare, mawairesi, materevhizheni, vhidhiyo yemitambo yekunyaradza, nezvimwe, zvese izvi zvigadzirwa zviri pamusoro vatengesi pamhepoKana iwe uine nhare yekare uye uchida kutenga imwe nyowani asi usina mari yekutenga, masaiti aya anoita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane izvo zvaunoda, zvigadzirwa zvemagetsi zvinotengeswa zviri nyore kwazvo, saka kana iwe uine chimwe chinhu yekare iwe yaunoda kubvisa Isa iyo kumusoro kuti itengese uye pamwe ndizvo zviri kutsvaga mumwe munhu.
Zviuru nezviuru zvemadhora zvakagamuchirwa ne E-commerce mawebhusaiti Kupfuura makore, ivo vanobva pakutengesa mota, zvingangoita zvisingawanzo kuwana mutengi wemota yausingade, asi ndeimwe yezvinyorwa zvakaburitswa zvakanyanya pamapeji eE-commerce. Kana iwe uchifunga kuti kutengesa mota online kumhanyisa, usanetseka kune vanhu vazhinji vari kuzviita izvozvi uye vachiita mari kubva kwazviri.
Aya mawebhusaiti inzvimbo huru yekutengesa mabhuku, anogona kuve mabhuku ausingachafarire, kana iwe unongoda kutengesa yakawanda yavo kuti vatenge zvimwe, E-commerce ndiyo saiti yakoZviuru zvemabhuku zvinotengeswa zuva rega rega, uye panogona kunge paine vanhu vanofarira izvo zviri muhari yako yemabhuku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Ndezvipi zvinhu zvandinogona kutengesa pamhepo?